हुनत सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दै सजिलो योजना जस्तो लाग्न सक्छ, सट्टा हिड्ने प्रयास गर्नुहोस्. छोटो दूरी ती व्यक्तिहरूको लागि उत्कृष्ट छ जो अत्यन्त फिट छैनन्, यद्यपि अधिक तपाईं गर्नुहुन्छ, यात्राको क्रममा तपाईंको फिटनेस बढ्ने छ. A long brisk walk can make all the difference when staying in shape while traveling for those who are already quite fit. Consider getting off your bus or taxiafew blocks before so that you can walk the rest. ट्रेनहरू छन्, को पाठ्यक्रम, यो एक उत्तम तरीका देश बाट देश मात्र होइन, शहर शहर र शहर भित्र पनि. केही ट्रेनहरू तपाईको रेलबाट छिट्टै जानुहोस्, and take in the sites and sounds of your holiday destination to maximize your ability to stay in shape while traveling.
यात्रा गर्दा आकारमा रहनु भनेको व्यायामको बारेमा हो. यदि तपाई धेरै खाना खान्नुहुन्छ भने यात्राको बखत तपाईको मांसपेशी र फिटनेस कायम राख्न अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्न, धेरै पिउने पेय, र कुनै कसरत नगर्नुहोस्. तपाईंलाई केवल आवश्यक छ 15 मिनेट हरेक बिहान मिनी कसरत प्राप्त गर्न. यदि तपाईं प्राकृतिक क्षेत्र जस्तै समुद्री तटमा हुनुहुन्छ भने, यो धेरै व्यस्त हुनु अघि बाहिर जानुहोस्, र बालुवामा योग वा बल प्रशिक्षण गर्नुहोस्. कार्डियो एक रनको साथ प्राप्त गर्न सकिन्छ, पदयात्रा, वा एक चाँडो पौडी. छोटोका लागि युट्यूबसँग धेरै उत्कृष्ट भिडियोहरू छन्, छुट्टीमा आधारित कसरत यात्रा र फिटनेस सुधार गर्न को लागी. साँझ मा overindulge छैन प्रयास गर्नुहोस्, किनकि यसले तपाईंको बिहानको कसरतलाई असर गर्छ र अन्तत: तपाईं यात्रामा कति राम्रो आकारमा बसिरहनुभएको छ.
स्वादिष्ट, बटरी क्रोइसेन्ट्स र अन्य गुडीहरूले तपाईंलाई सिसा काउन्टरको पछाडिबाट संकेत गर्न सक्दछन्, तर यो सधैं एक उत्तम विचार इच्छा शक्ति को एक मध्यम राशि कायम गर्न को लागी हो. व्यवहार गर्नुहोस्, कुनैपनि तरिकाले, तर ओभरबोर्डमा जानु हुँदैन. बिहानको खाजामा केहि फल लिनुहोस्, र खाजाको लागि सलाद तपाईलाई यात्रामा आकारमा रहन सहयोग गर्न. त्यस तरीकाले तपाईंले आफ्नो क्यालोरीहरू कम राख्नुभएको छ केही खाजामा साटासाट गर्न सक्षम हुन.
यात्रा गर्दा आकारमा रहनु By Taking The Stairs
यदि तपाईं धेरै फ्लोरहरूको साथ होटेलमा बस्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंसँग उत्तम अवसर छ! लिफ्ट लिनुको सट्टा, सीढी लिनुहोस्! बानीको यो साधारण परिवर्तनले तपाइँको दिनमा कार्डियोको एक धेरै धेरै पाउनेछ, र तपाईंलाई धेरै स्वस्थ र फिटर यात्राको लागि सेट अप गर्दछ. यदि तपाईंसँग कुनै सीढीहरू वा केवल एउटा उडान छैन भने, तपाईंको नजिकको क्षेत्रमा केहि पत्ता लगाउनुहोस् र तिनीहरूलाई माथि दगुर्नुहोस् र तल यात्रा गर्दा आकारमा रहन मद्दत गर्नुहोस्.
धेरै देशहरूमा सहरहरु मा योजना बनाई स्थानीय पछाडि छ. योग वा क्यालिस्टेनिक्स पार्क वा मा संगठित वृद्धि प्राय: उपलब्ध छन्. यी गतिविधिहरूमा सामील हुनुहोस् यात्रामा आकारमा रहनको लागि. क्रसफिट फिटनेस सुधार गर्ने अर्को विश्वव्यापी घटना हो, त्यसैले कक्षामा सामेल हुनको लागि तपाइँको तालिकाबाट केही समय लिनुहोस्, या त भित्र वा बाहिर. Your local guide or concierge should be able to point you in the right direction for these.
पोखरीको छेउमा त्यो ककटेल छ, वा पबमा हिमपात बियर सधैं राम्रो हुन्छ. Overdoing it will result inadrop in your fitness. Not just because of the sugar but also the lack of motivation the next day. तपाईं चाहनुहुन्छ भने अनौंठो पेय छ, तर तिनीहरूलाई न्यूनतम राख्न प्रयास गर्नुहोस्. याद गर्नुहोस् कि मीठा मिठो ककटेलहरू क्यालोरीमा धेरै हुन्छन्, बियर र पनि सेतो वाइन छ. यात्राको बखत आकारमा रहन सहयोगको लागि उनीहरूलाई कार्य गर्न तपाईंको योजनाबद्ध कसरतलाई कडा बनाउनेछ.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “10 सुझावहरू आकारमा रहँदा यात्रा गर्दै” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र हामीलाई क्रेडिट दिन सक्छ यो ब्लग पोस्ट गर्न लिंक. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://embed.ly/code?URL = https://www.saveatrain.com/blog/tips-staying-shape-traveling/ اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
europetravel longtrainjourneys StayFit StayInShape रेल यात्रा Travelingtips